Oovimba be-DOGE-Funda ukurhweba
Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwe-21-day SMA kunye ne-50-day SMA eyenza ukuba ikwazi ukuwa. I-cryptocurrency ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokufikelela ekuphelelweni kwe-bearish. Kwakhona, imarike ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Abathengi banokuvela. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekile emacaleni zibonisa indlela esecaleni. Uqikelelo lwamaxabiso eDogecoin 2022 looks super bullish.